Nanampy Handrenesana Ny Feoko Ny Espaniola, Fiteny Izay Nanindriana Ireo Razako Fahiny · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2016 17:56 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, English, Ελληνικά, 日本語, Español
Ankizivavy eo anoloan'ny sekoliny ao afovoan'ny alan'i Costa Rica. Sarin'i Diego David García. Navoaka teo ambany fahazoandàlana Creative Commons.
Ao anatin'ny ampahany voalohany, hazavain'i Shirley Campbell ny fomba nanapahan'ireo ray aman-dreniny Afrikana-Karibeana hevitra tsy hiteny tamin'ny teny Anglisy taminy sy tamin'ireo anadahiny sy rahavaviny, angamba antony iray mba tsy ho hafa loatra amin'ny fitenenana Espaniola izay fiteny ao Costa Rica.
Ao anatin'ny ampahany faharoa, adihadiany ny fifandringotan'ny fiteny sy ny maha ianao anao — ary indraindray mety hifanohitra izy roroa. Navoaka voalohany tao amin'ny vohikala Afroféminas ito lahatsoratra ito. Naverina navoaka ato amin'ny Global Voices anaty ampahany roa, nahazoana alàlana.
Amin'ny alalan'ny fiteny no idirantsika ao amin'ny tontolo sy tany iray, ary mianatra avy amin'ireo hira sy tantara ary angano sy fivavahana. Manome alalana antsika hilomano ao amin'ny tantara sy ny fiainam-panahin'ireo vahoakantsika ny fiteny, ary mampianatra antsika hahatsapa sy hiaina amin'ny lafiny iray. Tsy hoe làlana hidirana amin'ny tontolon'ny olona hafa fotsiny ny fiteny, fa mampilomano antsika ao anatin'ireo tontolontsika mihitsy amin'ny fanampiana antsika hahazo ny tenantsika ary manaiky ny tenantsika ho ampahan'ny zavatra iray.
Amin'ny lafiny iray, fitaovana matanjaka iray ihany koa ny fiteny, entina hanindriana sy hanavakavahana, ary tena fitaovana mahomby hampitàna sy hametrahana soatoavina. Niharan'izany avy amin'ny lafiny rehetra ny olona avy any Afrika toa ahy. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny fiteny rehetra ary ny faritra rehetra, niezaka ny hitraka amin'ny fomba rehetra ireo avy any Afrika mba hitazona ny ampahan'ny lovany izay efa nananosarotra ny nahazoany azy ary zara raha vitan'izy ireo ny nitahiry azy tao anatin'ny dingana.
Raha ny momba ny ray aman-dreniko izao, lehibe sy nianatra avy amin'ny fiainany teto an-tany tamin'ny alalan'ny fiteny Anglisy izy ireo, ary taty aoriana, noho ny filàna, voatery namindra ny ampahan'izany lova izany tamin'ireo tranany, fa kosa tamin'ny fiteny hafa.
Tsy mikasika ny fianakaviako irery io tantara io; mifanohitra amin'izany, tantara miverina hatrany amin'ny fiainan'ireo olona avy any Afrika io. Tena nilainay ny mamerina manorina tena hatrany hatrany – tantara iray miverimberina hatrany any anatin'ireo fiteny samihafa. Nisy fifindramonina voatery tao anatin'ny an-jato taonany, izay nahatonga antsika nionona niaina tamin'ny fiteny sy fiarahamonina hafa ary tany amin'ireo firenena hafa tamin'ny tontolo niainana tsy dia tsara loatra.
Nampianatra ahy ny zavatra rehetra fantatro tamin'ireo fiteny samihafa ary tamin'ny fanononana samihafa ireo ray aman-dreniko sy ny vondrom-piarahamoniko. Ny zavatra tsy fantatro, nangoniko avy amin'ny fanangonana singan-tantara sy hira ary fombandrazana teny am-pandehanana teny ireny, ary araka izany, nanandrana nanao fanambatambarana, namorona rohy, ary nitady fitoviana tamin'ny fiainan'ny hafa – mametraka ny tenako amin'ny trangam-piainana hafa ary kaontinanta hafa mba hanamboatra ny maha-izaho ahy.
Miaraka amin'izany mombamomba ahy rehetra nolovaina sy namboarina izany, ny fianakaviambeko sy ny vondrom-piarahamonina, tamin'ny fiteny sy fanonona samihafa, io hetaheta haneho tsy fanajàna sy hanao fikatrohana io, izay tsy fiteny na inona na inona afaka hanàla azy amiko.
Azoko tsara anefa hoe entin'io zavatra iainana io miaraka aminy koa ny tena zavamisy hoe natao anterisetra ny nametrahana io fiteny io ary lasa tsy afaka miteny ny tena fiteninay intsony izahay. Hetraketrahana izahay rehefa mampiasa ny anaranay ary mihira ny hiranay. Azoko tsara hoe tamin'ny halozàna no nanokànana ireo razambeko mba hisorohana ny fifaneraseràn'ireo mpikambana amin'ireo foko mitovy, ary araka izany, hisorohana ny fifampiresahana sy fitroarana. Kanefa, ary tena zava-dehibe, nezahan-dry zareo novonoina tsikelikely ny fanahy sy fitiavan'ireo ntaolo ireo. Noho izany, nanomboka nanadino ny fomba tena masina indrindra fifaneraseranay, fitiavana ary ny ara-pinoana izahay. Vokatr'izany, mila mamorona sy mamerina mamorona ny momba anay hatrany izahay, amin'ny fomba mafy, kanefa amin'ny fomba misy famoronana mba ho tafavoaka velona.
Takatro hoe talohan'ny reniko, nisy fiteny hafa niresahana ary fomba fanononana hafa mihitsy no nifampiresahana, izay nivavahany, niadiany, nihiràna sy nilalaovana kilalao izay nentin'izy ireo avy any amin'ireo toerana sasany tany Afrika, izay toerana nangalàna azy ary tsy mbola tongan'ny fikarohana ataoko.
‘Tsy hisy mandrakizay intsony ny tantara hotantaraina sahala amin'ny hoe tokana’
Tsy mikasika ahy manokana fotsiny ito tantara ito; mikasika an'ireo olona sy fianakaviana ary vondrom-piarahamonina an-tapitrisany sy ireo olona rehetra maneran-tany io. Ireo vondrom-piarahamonina voatery nitombo tao ambany fiteny samihafa, ary tao anatin'ny tsirairay taminy dia mamorona, mamerina mamorona, manavao, manoratra, mamerina manoratra ary mamerina maminavina ny haren'ny tantara sy angano ary hira mba hampatanjaka anay ary hiverina hisy indray. Eny antsefatsefany eny, mila mamerina mametraka indray ny rohy amin'ny razambe nihaviantsika isika ary manamboatra tetezana vaovao izay mampifandray antsika amin'ny ara-panahy sy ny fahendrena ilaina amin'ny tsy hahalany tamingana anay.
Na ankehitriny aza, mbola fehimpehezina sy ahilikilika ihany izahay. Na eo aza izany, mbola mandresy ihany izahay, amin'ny maha mpandova anay hoe avy amin'ny olona tena mahagaga izahay, izay mitraka hatrany ary manamafy ny fanahiny sy manohy mametraka marika amin'ny tany.
Ny reniko, ny raiko, ary ny vondrom-piarahamoniko, samy niezaka – tamin'ny fampiasàna fiteny vaovao – ny hanome anay ireo fitaovana ilaina mba tsy hilavoana lefona, hitazonana ny fomban-drazana, ny ara-panahy, hatramin'ny kolontsaina izay notandrovan'izy ireo mafy nandritra ny làlana nolalovany. Ilay kolontsaina izay navotan'ireo razambeny tsikelikely ihany koa ary nezahany naorina indray tamin'ny ezaka lehibe sy faniriana tsy nitandroana hasasara teny am-pandehanana.
Hatramin'ny nahatsiarovako tena, fiteny Espaniola no nifandraisako
Tsy dia safidiko loatra, fa dia ny teny Espaniola no teny itoriako ankehitriny. Ary na miteny fiteny hafa aza aho, mambabo ahy sy mitondra ahy ary mampanembonembona ahy ny Espaniola; fitaovana iray manampy ahy ho afaka io. Manafaka ahy io satria ahafahako mahatsapa ny zavatra tsapako izao, ary mamela ahy hanoratra miaraka amin'ny fitiavana anoratako amin'izao.
Manome tononkalo ho ahy io fiteny io. Ary na azoko aza ireo fahotàny, tsy afaka ny handà azy io intsony aho, satria miaraka amin'io, afaka mifanamby amin'ireo miezaka ny hanimba anay aho, ireo mampiasa fiteny mankahala mba hanoherana ny adinay. Amin'io fiteny io, nizara ny resadresaka mamy indrindra niaraka tamin'ireo vehivavy sahala amiko aho, manana volon-koditra mitovy izay nila teny tahàka ny azy ihany mba hahatsapàny fahatokisan-tena sy hatsarantarehy.
Nanome zava-mahagaga sy feo ahy io fiteny io. Ankehitriny, nahatonga ahy hanana fifandraisana amin'ny hafa ny nandrongatra ny hatezerako. Amin'ny teny Espaniola, mamindra fitiavana amin'ireo zanako aho ary feno fitiavana ho an'ny tenako sy ny vahoakako. Miteny azy io aho, manoratra azy io, milaza azy io, manambara azy io, mihiaka ary mihira azy io. Ary amin'ny alalan'io, miezaka ny manome fahendrena aho, kolontsaina, fiainam-panahy, ary indrindra indrindra, mihiaka ho an'ny rariny ho an'ny vahoakako aho.
Ankehitriny, manome hafaliana ahy io fiteny io.
Efa lahatra ho ahy ny hiteny io fiteny io ary izany no manome feo ahy. Fiteny iray fotsiny ihany anefa io, satria ireo olona hafa avy any am-pielezana dia miresaka sy milaza ary mihira amin'ny fiteny maro samihafa, ary toa ahy, mankafy azy io ankehitriny satria io ny feon-dry zareo. Mamerina mamorona hatrany ny Espaniola-ko aho isanandro, ary amin'ny fampiasàna azy io ho amin'ny tombontsoako, ezahako ny hitondra fahazavana mifototry amin'ny tantaran'ireo fideràna am-bava sy fandreseko. Manorina sy mandrava azy io isanandro aho, ary mampiasa azy ho fitaovana fanamarinana hevitra fa tsy famoretana sy fanavakavahana ny vahoakako.